“၉ မမ ခေဓ သေနတ်”စမစ်ဝယ်လ်ဆင် S&W MP9 mm | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Sports & Recreation » “၉ မမ ခေဓ သေနတ်”စမစ်ဝယ်လ်ဆင် S&W MP9 mm
“၉ မမ ခေဓ သေနတ်”စမစ်ဝယ်လ်ဆင် S&W MP9 mm
Posted by Sa Yar san on Sep 30, 2014 in Sports & Recreation |7comments
S&W mp 9mm ပစ္စတို အကြောင်းပါ ဝါသနာ ပါသူ များ အတွက် ဗဟုသုတပေါ့
ဒီသေနတ်ဟာ အမေရိကန်ထုတ်ဖြစ်ပြီး ပြောင်း က ၄ လက်မရှည်ပြီး၆ပေါင် နီးပါးလေးပါတယ် ကျည်ဆံကတော့ ၁၈ တောင့် ဆန့်ပြီး ကျည်ကတ် အပိုတခုလဲ ပါပါတယ် အရမ်းတည့်တည့် သွားတဲ့ သေနတ်ဖြစ်ပါတယ် လူတွေ အဝယ်ဆုံး သေနတ် အမျိုးစား တခုလဲ ဖြစ်ပြီး လူတွေ အြ ကိုက် ကို ကြယ် လေးတွေ နဲ့ ပြထားတာ က ကြယ် ၅ ပွင့် အဆင့်ရှိပါတယ် မြန်မာအခေါ် ရတော့ ၉ မမလို့ ခေါ်ပါတယ် မြန်မာ ငွေ နဲ့ ဆို ၅သိန်း နီးပါးဘဲ ကြပါတယ် အသေး စိပ် ကို ယူကျူ့မှာကြည့်ရှူ့နှိုင်ပါတယ် ..။
စိနနဲ့အိန္ဒိယကြားညပ်နေတဲ့.. မြန်မာလိုနိုင်ငံမျိုးက.. လူတိုင်းသေနတ်ကိုင်ခွင့် အခြေခံဥပဒေနဲ့ပြဌာန်းရှိသင့်တယ်..။
…အဲ့တာပြောတာပေါ့ခည….စိနနဲ့အိန္ဒိယကြားညှပ်နေတဲ့…( ထိစပ်နေတဲ့ …တခုတည်းသော ပြည်နယ်) ….ကလူတွေသေနတ်ကိုင်တာ အပြစ်မဟုတ်…အဟိဟိဟိ…မြန်ကျန့်အစိုးရ …ဒါမျိုးအမြင်ရှိရမှာ…အဟိဟိ …
အစ်ကိုဝမ်းကွဲစိတ်ဝင်စားတာကလေသေနတ်… ငှက်ပစ်တာ.. အဲ့ဒီကကောင်တွေ မသယ်လာပေးရဲတော့ မဲဆောက်ဖက်မှာ တက်ရှာတယ်…
.ခိခိ.တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတဲ့.မြန်တျန့်လို တိုင်ြးပည်အတွက်တော့ အချိန်အများကြီးလိုအုံးမယ်ထင်ရဲ့
ထောက်ခံပါတယ်. လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာဘောပွဲကြည့်ရင်း ပြသာနာတက်ပြီး သေနတ်နဲ့ ထပစ်တာမျိုးဖြစ်မှာ ကြောက်ရတယ်.
ကိုယ့်လူတွေက စိတ်မြန်လက်မြန်သမားတွေများတယ်.. ဟီး ။
အရင်က မြန်မာ ပြည်မှာ တရားဝင် သေနတ် ကိုင်ဆောင်ခွင့် ရှိထားပြီးသားပါ သို့သော် လဲ သေနတ် ရှိသူတွေက သေနတ်မရှိသူတွေ ကို ချုပ်ထိမ်း ဖို့ လိုင်စင်ရပြီးသား တရားဝင်သေနတ်တွေပါ ပြန်သိမ်းစည်းခဲ့ပါတယ် ဒါပေမဲ့ သေနတ်ကိုင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ တောင် ပေါ်နဲ့ တောကြတဲ့ နေရာတွေ မှာ သွားနေရင် တော့ သေနတ်ရှိတဲ့ လူတွေက တလုံးထိုး( ရှော့ဂန်း) နှစ်လုံးပြူးတို့ ကို တောလိုက်လို့ ရအောင်ရောင်းပေးပါတယ် တချို့ ရန်ကုန်မြို့ ပေါ်မှာ တရားမဝင် သေနှတ်တွေ ရှိတယ်ဆိုတာလဲ အများကြီးပါ
ကျွန်တော် နဲ့ မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ လူတယောက် ဟာ ပန်းဘဲတန်း က တိုက်ခန်း ကို ဝယ်လိုက်ပြီး အိမ် နံ ရံတွေကို ပြန် ပြင် လိုက်တဲ့ အခါ မှာ ၆လုံးပြူး သေနတ်တလက်ထွက်လာပါတယ် ဒါ ကို နိုင်ငံတော် ကိုတာ ဝန်သိစွာပြန်အပ် နှံ မှူ့ ကြောင့် ၂ နှစ် တိတိ စစ်ဆေး ခံ ခဲ့ ရပါတယ် သူ ပြောပြချက် အရ ဘယ်တော့မှ တာဝန် မသိနဲ့ ကိုယ်ရှူး ကိုယ် ပတ်သလိုဘဲ တဲ့ ကောင်းရော…။